30,000 tan oo ah soosaarka bacriminta dabiiciga ah - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Khadadka wax soo saarka sanadlaha ah ee 30,000 tan ee bacriminta dabiiciga ah waa in loogu beddelo dhammaan noocyada qashinka dabiiciga ah bacriminta dabiiciga ah iyada oo loo marayo habab kala duwan. Warshadaha bacriminta noolaha uma rogi karaan oo kaliya digada digaagga iyo qashinka inay noqdaan khasnad, iyagoo soo saaraya faa'iidooyin dhaqaale, laakiin waxay kaloo yareeyaan wasakheynta deegaanka iyo soo saarista faa'iidooyinka deegaanka. Qaabka jajabku wuxuu noqon karaa mid dhul-goos ah ama mid goobaaban, taas oo ay fududahay in la qaado lana isticmaalo. Qalabka waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo baahidaada dhabta ah.
Waxaan bixinnaa qaabeynta iyo soosaarida khad cusub oo waxsoosaarka bakteeriyada loogu talagalay bacriminta dabiiciga ah. Qalabka xariiqda wax soo saarka badanaa waxaa ka mid ah buunshaha iyo quudiyaha, mashiinka kala sooca cusub, qalajiyaha, mashiinka wax lagu shaandheeyo, qalabka baaldiga lagu qaado, qalabka wax lagu rakibo, mashiinka wax lagu rido iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah.
Bacriminta dabiiciga ah waxaa laga sameyn karaa haraaga methane, qashinka beeraha, xoolaha iyo digada digaaga iyo qashinka degmada. Qashinkan dabiiciga ah wuxuu ubaahanyahay in lasiihafeeyo kahor intaan loobadalin bacriminta ganacsiga dabiiciga ah ee qiimaha ganacsiga iibka ah. Maalgashiga qashinka loogu beddelayo hantida gabi ahaanba waa mid qiimo leh.
Kheyraad dabiici ah oo ceyriin dabiici ah
Qalabka ceyriinka ee bacriminta dabiiciga ah waa hodan ku ah kheyraadka, kuwaas oo inta badan loo qeybiyo qeybaha soo socda. Qalab kala duwan ayaa lagu dari karaa qalab wax soo saar oo kala duwan:
1. Saxarada xoolaha: sida digaaga, doofaarka, shinbiraha, lo'da, adhiga, fardaha, bakaylaha IWM, haraaga xoolaha, sida kaluunka, hilibka lafaha, baalasha, dhogorta, digada xarka, barkadaha biogas, iwm.
2. Qashinka beeraha: cawska dalagga, ratta, cuntada soybean, cuntada lagu kufsaday, cuntada cudbida, cuntada xabka xariirta ah, budada khamiirka, hadhaaga boqoshaada, iwm.
3. Qashinka warshadaha: qashin khamri, haraaga khalka, haraaga kasaafada, dhoobada shaandhada, haraaga dawada, dhoobada dhogorta, iwm.
4. Dhoobada dawlada hoose: dhoobada webiga, dhoobada, dhoobada godka, dhoobada badda, dhoobada harada, humic acid, cows, lignite, dhoobada, dambaska duqsiga, iwm
5. Qashinka guriga: qashinka jikada, iwm.
6. Qaamuus ama soo saar: soosaarida badda, soosaarida kalluunka, iwm.
1. Burburinta maaddada Semi-wet-ka waxaa loo isticmaalaa in looga dhigo mid la jaanqaadi kara qoyaanka alaabta ceeriin.
2. Mashiinka dahaadhka walxaha wuxuu ka dhigayaa mid isku eg cabbirka walxaha, dusha sare waa siman yahay, xooggiisuna wuu sarreeyaa. Ku habboon isku xirka granulators kala duwan.
3. Khadadka wax soo saarka oo dhami waxay ku xidhan yihiin qaadista suunka iyo qalabka kale ee taageera.
4. Qaab dhismeedka is haysta, waxqabad xasiloon, hawlgal ku habboon iyo dayactir.
5. Qalabka waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo baahidaada dhabta ah.
Nidaamka waxaa ka mid ah qalabka halsano, mashiinka, mashiinka kala soocida, qalajiyaha, qaboojiye, mashiinka shaandhada shaandhada, silo, mashiinka baakadaha oo si buuxda otomaatig u ah, qalabka wax lagu jajabiyo, qalabka wax lagu raro, iyo wixii la mid ah. halsano → isku darka maaddooyinka (isku qasida walxo kale oo dabiici ah, NPK≥4%, maadada organic30%) ulation granulation → baako. Xusuusin: Khadkan wax soo saar waxaa loogu talagay oo kaliya.
Geedi socodka halsano ayaa gebi ahaanba kudarsada qashinka dabiiciga ah halsano iyo bislaansho. Fiilooyin kala duwan sida qashin-qubka socodka, qashin-qubka laba jibaaraha ah, fiilooyinka jeexjeexan, qashin-qubka hydrogen-ka iyo qashin-qubka ay soo saarto shirkaddeena ayaa lagu xulan karaa iyada oo la raacayo waxyaabaha dhabta ah ee lagu bacriminayo alaabada ceeriin, goobaha iyo alaabada
2. Mashiinka wax burbura
Qalabka ceeriin ee khamiirku wuxuu galaa Furimaha silsiladda toosan, kaas oo burburin kara alaabta ceeriin ah oo leh biyo ka yar 30%. Cabbirka walxaha wuxuu gaari karaa amarrada 20-30, oo buuxiya shuruudaha kala-soocidda.
3. Mashiinka Horizontal
Bur burinta kadib, kudar walxaha kaabayaasha sida ku cad qaaciidada iskuna walaaq iskumarka. Horizontal fiicni wuxuu leeyahay laba ikhtiyaar: qas a uniaxial iyo a fiicni laba-dhidibka.
4. A granulator cusub oo bacrimiya
Qiyaasta granulation-ka ee mashiinka mashiinka waa sida ugu sareysa 90%, taas oo ku habboon noocyo kala duwan oo qaaciidooyin ah. Awoodda isdabajoogga ah ee jajabku way ka sarreeyaan tan granulation disk iyo durbaanka durbaanka, iyo qiyaasta goobaaban ee ballaadhan ay ka yar tahay 15%.
5. Tuuraha wareega
Mashiinka wareega wuxuu dayactiri karaa oo qurxin karaa walxaha ka kooban granulation ka dib marka la soosaaray. Ka dib markii la nadiifiyo granulation ama geedi socodka granulation disk, ka dib markii la tuuro wareejinta, qaybaha bacriminta waxay noqon karaan kuwo isku mid ah cabbirka, wareega saxda ah, dhalaalaya oo siman dusha sare, xoogga walxaha waaweyn, iyo dhalidda guud ee bacriminta ayaa ah sida ugu sareysa 98%.
6. Qalalan oo qabow
Qalajiyaha duubku wuxuu si isdaba joog ah u tuuraa ilaha kuleylka ee kuleylka kulul ee sanka meesha sanka ilaa dabada mashiinka iyadoo loo marayo marawaxada lagu rakibay dabada mashiinka, si maadadu ay xiriir buuxa ula leedahay hawada kulul una yareyso biyaha waxa ka kooban qurubyada.
Qaboojiyaha rullaluistemadka qaboojiyaha Qurub heerkul gaar ah ka dib markii la qalajiyo, iyo yaraynaysaa biyaha ee walxaha mar kale iyadoo la yareeyo heerkulka walxaha.
7. Kala shaandheeye
Waxaa badanaa loo isticmaalaa kala soocista alaabada la dhammeeyay iyo waxyaabaha dib loo rogay. Kala shaandhaynta ka dib, jajabyo u qalma ayaa lagu quudiyaa mashiinka dahaadhka, iyo qaybo aan u qalmin ayaa lagu quudiyaa jajabinta silsiladda tooska ah si ay dib ugu noqdaan, sidaas awgeedna lagu gaaro kala soocida wax soo saarka iyo kala soocida dharka ee alaabada la dhammeeyay. Mashiinka wuxuu qaataa shaashad isku dhafan, taas oo sahlan in la ilaaliyo lana beddelo. Qaab dhismeedkeedu waa mid fudud, fudud oo la shaqeyn karo oo siman. Joogto, waa qalab lagama maarmaan u ah soo saarista bacriminta.
8. Mashiinka Baakadaha:
Dahaarka jajabyada uqalma iyada oo loo marayo mashiinka dahaadhka wareega ayaa kaliya qurxinta qurxinta, laakiin sidoo kale waxay hagaajinaysaa adkaanta qaybaha. Mashiinka dahaadhka wareega wuxuu qaadanayaa tiknoolajiyada buufinta walxaha dareeraha ah iyo tiknoolajiyada buufinta budada adag si wax ku ool ah looga hortago xannibaadda walxaha bacriminta.
9. Mashiinka baakadka otomaatiga ah:
Ka dib markii jajabku dahaadhan yahay, waxay ku baakadeeyaan mashiinka baakadaha. Mashiinka wax lagu baakadeeyo wuxuu leeyahay qalab otomaatig ah oo heer sare ah, isku dhafka miisaanka, tolida, baakadaha iyo gaadiidka, taas oo ogaata baakadaha xaddidan ee xawliga ah isla markaana ka dhigaya habka baakadeynta mid wax ku ool ah oo sax ah.
10. Suunka gudbinta:
Gaarriyuhu wuxuu door lama huraan ah ka ciyaarayaa habka wax soo saarka, maxaa yeelay wuxuu isku xiraa qaybaha kala duwan ee dhammaan qadka wax soo saarka. Khadkan soo saarista bacriminta ee xarunta, waxaan dooranay inaan ku siino suunka xambaara suunka. Marka la barbardhigo noocyada kale ee wax lagu raro, kuwa wax geeya suunka waxay leeyihiin caymis ballaaran, taasoo ka dhigaysa habka wax soo saarkaaga mid waxtar badan oo dhaqaale leh.